नेप्से अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा, कतिको भयो कारोबार ? « Mayadevi Online News Portal
नेप्से अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा, कतिको भयो कारोबार ?
प्रकाशित मिति : २३ जेष्ठ २०७८ आईतवार १५:५५
नेप्से परिसूचक आज ५०.१३ अंकले बढ्दै २९०६.८९ विन्दुमा पुगेको छ । यो अंक अहिलेसम्कै उच्च हो । यसअघि सबैभन्दा बढी गत बिहीबार नेप्से परिसूचक २९ अंकले बढ्दै २८५६ं.६७ विन्दुमा रोकिएको थियो ।
आज ३ करोड ७४ लाख ५५ हजार १८९ कित्ताको किनबेचमा १७ अर्ब २७ करोड १७ लाख ८७ हजार ५२५ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज भएको कारोबार पनि अहिलेसम्मकै बढी हो । यसअघि २०७८ जेठ १६ गते १७ अर्ब २ करोड ८४ लाखको करोबार भएको थियो ।
सबैभन्दा धेरै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयर १ अर्ब २१ करोड रूपैयाँको कारोबार भयो । यसैगरी नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको ८३ करोड रूपैयाँको कारोबार भयो । आज महिला लघुवित्तको शेयर सबैभन्दा झण्डै १० प्रतिशतले बढेको छ ।